I-Adobe Premiere Rush ngoku iyahambelana ngokupheleleyo ne-Apple's M1 | Ndisuka mac
I-Adobe ikhuphe uhlaziyo olukhulu lwe-Premiere Rush izolo, ukongeza ukuhambelana ngokupheleleyo ne-M1 chip, kunye noluhlu lwezinto ezincinci ezihlaziyiweyo zePremier Rush kunye neNkulumbuso Pro.Le nguqulo intsha ifika kwiintsuku ezimbalwa emva kokumiliselwa kwe-beta yokuqala ye-Illustrator ye-Apple Silicon.
INkulumbuso Rush kukusetyenziswa kwe ukuhlela ividiyo yeAdobe yenzelwe ukuququzelela ubuchule bokuyila kwaye iyenye ye-Apple's Final Cut Pro. Uhlaziyo olutsha kwi-Premiere Rush luphucula isantya kunye nokusebenza kwiikhompyuter zedesktop zisebenzisa i-M1 chip.
Kwelinye icala, iPremier Pro yile kubandakanya ukujonga kwangaphambili kweLumetri. Ukusetwa kwangaphambili kweLumetri ngoku kubonisa isakhelo solandelelwano lwangoku, kunye nezithonjana ze-Lumetri ezisetiweyo kwiphaneli yeziphumo ezihlaziya ngamandla, zibonelela ngomboniso wangaphambili.
INkulumbuso yeRush ye-iOS nayo ihlaziyiwe kubandakanya imenyu entsha yomxholo kumda wexesha. Abasebenzisi ngoku banokucofa iklip yevidiyo kumda wexesha lokuzisa imenyu yokuma, ukwahlula, okanye ukucima ikliphu. Ukongeza, abasebenzisi banokudlala iklip yevidiyo kunye nesandi ukwahlula ikliphu yeaudio kwividiyo.
Ukusebenza okungcono kokusetha kwakhona kongezwe, ukuvumela abasebenzisi ukuba setha kwakhona yonke imibala, isandi kunye notshintsho kuseto.
Khumbula ukuba iprosesa ye-M1 ye-Apple ifumaneka kuphela kwi-MacBook Air, i-13-intshi iMacBook Pro kunye neMac mini, nangona elandelayo Epreli 20, Unokwandisa uluhlu lwezixhobo ngale processor kunye noyilo lwe-ARM.
Ukukhuphela le nguqulo intsha, kufuneka sivule usetyenziso Adobe Creative Cloud kwaye ukhethe inguqulelo ye-ARM yesi sicelo yokukhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Adobe Premiere Rush ngoku iyahambelana ngokupheleleyo neM1 ye-Apple